सिंहदरबारमा बोलाएर मन्त्री र सचिवहरुलाई झपारे – ई नेपाल न्युज
सिंहदरबारमा बोलाएर मन्त्री र सचिवहरुलाई झपारे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम एवं बजेटको कार्यन्वयन सम्बन्धि प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले सिंहदरबारमा भएको बैठकलाई संवोधन गर्दै उनले उनले देश विकास र जनताको काम गर्नबाट कोहीपनि उम्कन नपाउने चेतावनी दिएका छन् । परिणाम र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले आफ्ना कमजोरीलाई तर्कको दिएर टाल्न नमिल्ने बताए ।
देशको परिस्थिती, जनअपेक्षा र आफुहरुको अभिभारा पनि बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी नहटेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको बताइएको छ । ऐन कानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो परिवर्तन गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए ।
‘सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहोस” मन्त्री र सचिबहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अव काममा संझौता हुन्न, आफ्ना कमजोरीलाई तर्कको लिउनले कसैले पनि टाल्न नखोज्नुहोस ।’ सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी नहटेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर असन्तुष्टी पनि व्यक्त गर्नुभयो । ‘सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी पुानै शैली, ढिलासुस्ती छ, यो कुराअव चाहिँ शैह्य हुन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।
‘एउटा टेवलबाट अर्को टेवलमा फाइल सर्न कैयौं दिन लाग्ने, सिंहदरवारको एउटा कार्यलयबाट अर्को कार्यलयमा पत्र पुग्न महिनौं लाग्ने, यो पाराले समृद्धि हासिल हुन्छ ? जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ? यस्तो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ? ‘ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘मन्त्रिपरिषदबाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस, मन्त्री, सचिबको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस । ऐन कानुनले ढिला सुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस । त्यस्ता ढिलासुस्तीका कारणलाई निरुपण गर्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अब कहीँ पनि ढिला सुस्ती स्वीकार्य छैन ।’
प्रकाशित मिति: November 21, 2018 December 9, 2018 , संवाददाता: ई नेपाल न्युज
नेपालका सबै होटेलहरु एकै वेबसाईटमा
दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन शनिबार काठमाडौंमा
वाईडबडीको तुलनामा फोरजी ठेक्कामा डरलाग्दो घोटला !
विप्लव र प्रकाण्ड सहित १६ जनालाई अदालतकोे सफाइ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डबाट शनिबार स्वेदश फर्कदै